Haingo - Bezzia | Bezzia
La ravaka Io no fomba tokony hanaovantsika ny tranontsika ho tsara tarehy, hahatonga azy io ho toerana azo iainana sy sariaka ary atambaro ny fomba amin'ny fomba tsara indrindra. Ao Bezzia izahay dia te-hanamora ny asa sy hanome anao torohevitra sy torohevitra hanatanterahana izany, manasongadina hatrany ny fomba isan-karazany, ny tantarany sy ny niandohany ary mazava ho azy koa ireo ohatra ananantsika amin'ireo orinasam-barotra samihafa.
Amin'ity fizarana ity dia mazava ho azy fa mijery ny fironana izany dia eo amin'ny tontolon'ny haingon-trano, miresaka loko lamaody, fanaka izay maka ny taloha na ny kojakoja izay manintona ny sain'ny manam-pahaizana amin'ity sehatra ity.
Ho eo ihany koa izahay amin'ny hetsika, hanome anao torohevitra izahay hahafahana manao zavatra ao an-trano ary hanome anao fanazavana momba ny toerana misy ny fomba tsara indrindra sy ny vokatra tsara indrindra izahay.
Ho anao izay mankafy fanjairana ho fialamboly dia tsy hafahafa aminao ilay teny manao patchwork any an-trano. Tsy izany koa, angamba, ...
Tianao ve ny radio taloha? Mihaingo miaraka amin'izy ireo!
Azo antoka fa manana radio iray na maromaro ianao ao an-trano. Satria izy ireo dia zavatra izay mijanona hatramin'ny taranaka fara mandimby….
Te hanana zaridaina kely ve ianao? Afaka mampitombo ny sakafonao avy amin'ny voa? Manohiza mankafy zaridaina ao ...
Fandringanana fanaka Ikea miaraka amina talantalana na am-bifotsy
Ireo teny amin'ny teny anglisy dia miha betsaka hatrany amin'ny voambolantsika isan'andro. Ary na dia tsy mahay mandika ny maro amin'izy ireo aza izahay, ...
Ny antsipiriany rehetra amin'ny haingo dia manisa. Noho izany, rehefa manaingo ny tranontsika izahay dia manandrana manome azy io hatrany ...
Loko sy singa fototra hamoronana varavarankely fivarotana fararano
Ny fikoloana akanjo am-baravarankely dia zavakanto iray izay ananan'ireo orinasa lehibe tsy misalasala manome loharano lehibe. Ny tanjony dia tsy ...
Craquelure, teknika izay maka tahaka ny fandehan'ny fotoana
Ireo sombin-javatra fanaka fahagola, miaraka amin'ny tantara, dia mpiara-miombon'antoka lehibe hanampiana toetra amina efitrano iray. Izany no antony tsy…
Hevitra handravahana ny efitrano fandraisam-bahiny miaraka amina sary sokitra mpamorona
Te hanome endrika vaovao ny tranonao ve ianao? Ka andao atomboka amin'ny andiana hevitra handravahana ny ...
Akanjo ny tranonao, fahavaratra, miaraka amin'i Mango Casa
Fantatrao ve ireo tolo-kevitr'i Mango Casa vaovao? Ny orinasa dia manana izay ilainao amin'ny fanangonana vaovao mba ...
Maninona no mametraka jacuzzi ivelany amin'ny tranonao na zaridainao
Rehefa avy tontolo andro any am-piasana, iza no tsy te hiala sasatra amin'ny fandroana mafana? Kely kokoa noho ny ...
Hanavao ny rindrina sy ny gorodon'ny tranonao tsy mila asa
Rehefa manomboka mieritreritra ny hanavao ny rindrina na ny gorodon'ny trano isika, dia azo antoka fa tonga amintsika ...
Ny vinaingitra cider dia manampy anao hanadio ny tranonao